Tags : ရန်ကုန်သားများနဲ့ မန္တလေးသူများ အဖွဲ့ဖွဲ့ကြပြီး သီချင်းအောက်တွင် ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည် ခင်ဗျား :P
By : mrcastle on May 26, 2010
Score: 154 Rating: 4.97 Comments: 73
မန္တလေးသားကျွန်တော်အား ဒီသီချင်းလေးကိုဆိုဖို့ IDEA ပေးလာပါသော ရန်ကုန်သူ ဆူဆန် ၊ RECORD လုပ်ပေးတဲ့ ချင်းပြည်နယ်မှ နိုင်းနိုင်း ( ဘာမှလဲမဆိုင်ဘူးနော် :P ) အားပေးကြပါသော SFY မှရန်ကုန်သားနှင့်မန္တလေးသူများသာမက အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှမောင်နှမများကို ကျေးဇူးအထူးပါဗျာ :)
jpbawi on Oct 29, 2010 0
shinigami on Oct 4, 2010 0
lwanwaikyaw on May 28, 2010 0
lovelybaby11 on May 27, 2010 0
ဆိုထားတာအရမ်းကောင်းတာပဲ။နောက်ထပ်လဲများကြီးဆိုပါအုံး။***************for bro castle&sis susan!
ပူညံပူညံနဲ့ ဒီကလေးနှစ်ယောက် ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲ !! ရန်ကုန်သာ့း မန္တလေးသူ သာမက ရန်ကုန်သူနဲ့ မန်းလေးသား တွေ အားလုံးသူ့ဟာသူတော်ကြကောင်းကြတာဘဲ လူကြီးလာမဆုံးမရင်မဆုံးမတဲ့အတိုင်းဘဲ ဟိုဘေးက ၉၉, မောင်သံဇင,် ဟစ်ပို တို့ လဲတူတူ ဘဲ ဝိုင်းပြီးရန်ကူဖြစ်နေကြတယ်။ ဒီလောက်ဖြစ်ကြတာ ရန်ဖြစ်နေသူတွေ အားလုံးတန်းစီပြီးကြိမ်လုံးနဲ့စော်သွားပြီ။ စတား၅လုံးလဲထားခဲ့တယ်လုမနေကြနဲ့အုန်း အတီးခံရအုန်းမယ် ဟီးဟီး::D
မဟုတ်ဘူးမမပီပီရေ...အစတုန်းကတော့ ဘေးမှာပဲနေပြီးဘာမှ ၀င်မပြောတော့ဘူးလို့နေတာလေ..ရန်ကုန်သူဘက်ကကြွားလုံး ကနာဂစ်ထက်ဆိုးတော့..အိပ်မရတာနဲ့အခုလိုတွေမြင်မကောင်း ရူမကောင်းသွေးသန်ရဲရဲတွေဖြစ်ကုန်တာ..:ha..(ကြိမ်လုံးဆိုရင် တော့ကြောက်လို့..ပြေးပြီဗျို့:P)
ဂွတ်တယ်ဗျို့... ရန်ကုန်သားနဲ့ မန်းလေးသူ.. ထမသတ်ကြနဲ့ဦး... ခုဟာက ရန်ကုန်သူနဲ့ မန်းလေးသားမဟုတ်ဘူးလား.. ပြင်ဆိုကြလေ... ဟားဟား...း)))))
ပြင်ဆိုခိုင်းလို့မရတော့ဘူး bro ရ..ပွဲကပြီးသွားပြီလေ..ပွဲအပြီးမှာ ကျွန်တော်တို့ ကိုရွှေမန္တလေးသားအဖွဲ့ အထိအခိုက်မရှိပဲ..ရန်ကုန် သူ စူစန်တို့အဖွဲ့ကတော့ ပတ်တီးစည်းတဲ့သူကစည်း..ပလာစတာ ကပ်တဲ့သူကကပ်နဲ့လေ..ညီမလေးစူစန်ဆိုရင် ဘယ်သူ့လက်သီး စာမိသွားလဲမသိပါဘူး..နှာခေါင်းမှာပါ ပလာစတာနဲ့ တွေးသာကြည့်လိုက်တော့ဗျာ..ဟဟဟ
wow....:)))))))...... Mandalay thar Brother MrC yaw,,, Yangon thu sister susan yaw,,a so yaw,,,a than yawayann paing tot. ,,,,,so nice to listen to your singing, talking and fighting.....:))))..........very Lively singing for both of you,......... listen ya tar ta gal ko Happy bot kaung tal,,,,,Chin pyi nal ka brother ko 9naing's mixing ka lal,,,,apoalo ma shi,,,listen lot kaung mha kaung,,,,,:)),,,..I loved it.....Special5stars for three of you,, bros and sis..********************:)))
yinlihoe on May 27, 2010 0
Aung Mel Lay Bya... Yan Kon Tar Gyi Ka Lel ... Arr Par Par Bel ... HaHaaHaaa. Kg Tel Byooooooooo Bra Castle Nae .. Mee Mee Nae.. Good .. Good ..Very Good.. *******
ပါရဲ ??? ကိုစိုးပိုင်ဂျီး ရွှေဂုံတားဂျီး ကိုခိုက်ဝါးပြီထင်ပ :D အဟားဟားဟားးးးးးးးးး:)))))))))))) မိုက်တလား ဂျောတလားးးး ဆိုရင် ပိုပေါတာဟုတ်ပူးးးးးးး :D >>>>> ဂျောလိုက်တာထိလို့တောင်မရပူးးး ငါးရှဉ့် လိုပဲ ဂျောချက်တော် ဂယ်ပဲစ် :haha :haha :ha :P >>>>မယုံရင်တော့ပုံပြင်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါဒေါ့ကွယ် ဟယ်ဟယ်ဟယ် >>>> :P >>>>>
Moe-Z-lay on May 27, 2010 0
ရန်ကုန်သူ အကြွားထူ ဘယ်သူတွေနဲ့မှမတူ...ခိခိ...မန္ဆလေးမှာ နေပူပူ ဖုန်ထူထူ..မန္ဆလေးသားတွေ ကြက်တူရွေးလို တကျွတ်ကျွတ်နဲ့ဆူ ဟိဟိ...ပြေးဦးမှ..မန်းလေးသားတွေ လိုက်မလာခင်...ရန်ကုန်သူ လက်မောင်းသန်သူ စစ်ကြီးကိုလည်း ကြောက်ရတယ်..တောင်ပေါ်ကို မြန်မြန်လစ်မှ....ရန်ကုန်သူ မန်းလေးသားတွေ တောင်ကို မတက်နိုင်ကြဘူးထင်တာပဲ ခိခိ************
ဟားဟားဟားဟားးးးး :)))))))))))ဟွင်းးးးးးးးးးးး တူက နှစ်ဘက်ခွပြီးးးးး ဒူ့ကိုမှအလွတ်မပေးးးး ပဲ ဆော်သွားတာကိုးးးးး :?:? ဒါမိုးတော့ပဲရမဒုန်း :no ဒီနေရာမှာတော့ ရန်ကုန်မန်းလေး မကြုံပူးအောင်သွေးစည်းညီညွတ်ဂျပြီ :mm :mm ကဲ .. လာဂျဝေးးးးးးးးး အပေါင်းးအသင်းးတို့,,,,,,,,,,,,,, ဒီတောင်ပေါ်သားးးးး ကို ဖနောင့်နဲ့တင်ပါးတစ်သားထဲဂျပြီးး ပြေးးး ရအောင် ပူးးးပေါင်းး ပညာပေးးး လိုက်ဂျဇို့ဝေးးးး ဝေးးးးးးးဟေးးးးးဟေးးးးးးးး ဟွန်းးးးး ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်တဲ့ကွနော :)))))))))))) :ha :haha :haha >>>>>>>>>>>>>>>
ပျော်စရာလေးပါ.. Bro နဲ့ Sis တို့ကို Stars အများကြီးနဲ့ အားပေးသွားပါတယ်။ Reallyagood one.. enjoyed italot! ****************!
ပျော်တယ်ဆိုလို့ဝမ်းတာရပါတယ်ချင့် :)))))) ဪ ဒါနဲ့မမက ပါမြို့တူလဲဟင်???? ဟီးးးး (ဂျဂါးခေါ်တာ ဟိ ) :D >>>>>>>>>>>
DE thichin layy ko swayy Nwayy Ya mal so yin taw.....sannmya ka.....Yagon thu sit sit Susan Lay bat ka palzzzz..:D.<BAR MHA LAR MA pyaw nelz tawtt Bro g F4:AHEEE:)))))))))>...fUNNY song &movie clip lay ko...thee so twer tar.....Bro &sis lay vocal nelzz realli realli perfect...A yann ko Like twer p...give Million special :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*yann ma phit kya par nelzz taw:D:P:))))))))))bravoooooooooooooooo>>>>>>>>>>>>
ဟေးးးးး ..... ဒါမှ ဝှိုက်မမ ကွ :atb :atb လာကွာ :mm :mm မန်းလေးတား ...သောင်းဂျန်းတူတေကို အပြတ်ချဲလိုက်ရအောင် အလဲလဲအကွဲကွဲ ဖစ်ကုန်အောင် အဟီးအီးအီးအီးအီးအီးးးးး:))))))))))))))))))))))))))) :P :D >>>>>>>>>>>>
I was wondering when you two would be doing duet on this song. :) Very creative, lively and entertaining, you guys! Great Job MK9as always! 5*
heheehhehehhehe:)))))))))) very glad ta hear u enjoyed italot majeeeeeeeee...... btw,,, r u YANGON thu , rnt u ??????? so plz join with us to fight with those kindda of bad guyz fr MANDALAY here .....ahahhahahhahahahhahahha:)))))))))))))))))) xie xie ni .>>>>>>
nawsis on May 26, 2010 0
ရန်ကုန်သူတွေဘက် မားမားမတ်မတ် ရပ်ပေးမယ် ရန်ကုန်သား nawsis လာပီ ရန်ကုန်သူတွေဘာမှပူနဲ့နော် ဆက်သာဖိုက်~~~~~~:P
လာပါ~~~~ လာပါ~~~~ မြန်မြန်လေးးးးး ဒီလိုလူမျိုးတေကိုပဲမျော်နေတာ အဟီးးးဟီးးး:))))))))))))) :D >>>>>>>>>>>>>>
chitmoe2009 on May 26, 2010 0
အရမ်းနားထောင်လို.ကောင်းပါတယ် ….. နားဆင်အားပေးသွားပါတယ်…:)********************million stars for both of u........
မမခိုင်ဂျီးကလဲကွာ နားဆင်ရုံသက်သက်တော့ လက်မခံနိုင်ပေါင် နိုးးးးးးး ဝိုင်းကူပါအုံး ......... ဒီမှာလူအင်အားတောင့်အောင် ဖြည့်တင်းပေးမယ်မချိပူးးးး ဟွင်းးးးး :S တူတို့ကိုအားကိုးပါတယ်ဆိုနေ :))))))))))) :P >>>>>>>>>>>
soramoe on May 26, 2010 0
a..so tway ka kg lite tar ~ 2youte sa lone ... ta kalataingaphaut nyi tal ~ayann pi pyinn tal ~ thi so mhu, mixing everything is great ~ Shwee ..Phyaung 3
ဆိုလိုတာက ,,,, ရန်ဖစ်ထားတာပီပြင်တယ် ပေါ့ ???? ဂလိုလား :haha အဟားဟားဟားးးးးးးးးးး :)))))) rough mixing ထဲကရယ်ရလွန်းလို့ မနေ့ညက ဂယ်နားထောင်လိုက်ရတော့ပိုဆိုးသွားတယ် :haha :haha အိပ်တောင်မအိပ်နိုင်တော့တာ alert n fresh ဖစ်ပြီးးး အဟားဟားအာရားရား:)))))))))))))))))))))))
turikimuriki on May 26, 2010 0
wow..ayan ko mite par tel ... so funny ... both of u sang really great ... yan ma phit nae taught nor *********************amyar gyi yuu taught :-P
ရပူးးးး ရန်ကတော့ ဆက်ပြီး ဖစ်နေဒုန်းပဲလေ တားနဲ့ဒေါ့ ဟားဟားဟားးးးး:)))))))))))))))
panshwe on May 26, 2010 0
taw taw yee ya tae` song lay naw.. :D .. bro and sis so twar tar atine apoat nyi nyi nae`, good pa. bar mha phat lo` ya boo.. home yoat mha pyan kyi tot mae.. :D.. listen pee vote kae` p :) ****************************************************
ကောင်းပြီ ဖတ်လို့ရရင်မြန်မြန်စဉ်းစား ပြီးရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြန်လာပါ ဒူ့ဘက်ကပါမလဲဆိုဒါ စိတ်ချပရစေနော ဟဲဟဲဟဲ:))))))))))))))))))))) :P
susu23 on May 26, 2010 0
sis susanlay nae bro mrcastle doe xo htar kya tar ayan kg tel kwal yan taung pyit tot ma lo lar...ko lu ko sawl kya naw..he..he..yan pyit kya tar ka lal pyaw sa yar gyi par lar nin toe hta ma su par buu naw.....ma su ka comment ne'vote lar pay tar **************wai yu kya naw ma lu kya nae..he..he.:P:P:P:D:D:))))))))
မပါလို့တော့ပယ်ရမဒုန်း :no ဒီတိုင်းတော့ပေးမပြန်နိုင်ပေါင် :no ကဲ .... အချိန်ကြာဒယ် မြန်မြန်ပေါ :? ဒူ့ဘက်ကပါမှာဒုန်း ???? အဟဲ ဒီဘက်ကိုလာနော ;) မမစုစု:))))))))))))))))))))))))
sithunaung on May 26, 2010 0
ဟဟ~ဆူညံဆူညံနဲ့ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီတုန်း~အသံတွေကြားလို့အိပ်ရာကနေလန့်နိုးလာပြီ!!~ ဪရွှေမန္တလေးသားကိုရဲတိုက်နဲ့မဟာရန်ကုန်သူမစူဆန်တို့ရန်ဖြစ်နေအဲ~ သီချင်းဆိုနေကြတာကိုး~းha>~ပြောရရင်တော့ရုပ်ရည်ရူပကာချောမောကြတဲ့ ရွှေမန္တလေးသားကိုရဲတိုက်ဘက်ကရှိပါတယ်ခင်ဗျ~ကိုယ်တိုင်ကလဲရွှေမန်းသားစစ်စစ်ကိုးဗျ~~ ရန်ကုန်သူတွေကကဇွန်းရွက်စားပြီးအကြွားထူကြတယ်ဆိုပဲကိုသံစဉ်ရေ~းP~ မစူဆန်ရဲ့လက်သီးကိုကြောင့်လို့ပြေးပြီဗျိုး~~အဟား~~ ရန်ကုန်သူတွေရန်လာတွေ့ရင်ကြည့်ကျက်ပြီးရှင်းလိုက်တော့ကိုသံစဉ်ရေ~~>>>>>>>>>>>>>
အမလေးးးးလေ :O:O ရုပ်ရည်ရူပကာ ကတော့ ဂျောလွန်းတဲ့နေရာမှာ ..... ငါးရှဉ့် ကိုကျောက်ကျောရေပက်" ထားတလိုပါပဲ :haha :haha :haha စဉ်းစားတာကြည့်ပါဒေါ့ချင့် :ha အဟစ်ဟစ်ဟစ် :))))))))))))အမယ် .............ကန်ဇွန်းရွက်စားကျင်လို့တောင်တူတို့မှာချားရလို့လားးးးး??? အဟားဟားဟား :P ဟုတ်ရယ် ..... အိမ်မှာ ကန်ဇွန်းခင်း ချိတေ လေ ချားကျင်ရင်ပေါ စွန့်ကျဲလိုက်မယ် အဟတ်ဟတ်ဟတ်:mm :mm :mm ပေါဒုန်းကပေါပြီးး ပါ ခုမှကြောက်ပါပြီလဲ ဟမ် :mad :angry လာပြီ.... လာလေရော့ := := := ဟွန်းးးးး ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်တဲ့ကွနော ဟားဟားဟားဟားးးးး :))))))))))))))))))))))))))) :haha >>>>>>
စိတ်ချ bro စည်သူရေ..ရန်လာတွေ့တဲ့ bro & sis တွေအကုန် လုံးကိုရှင်းပစ်လိုက်မယ်....အမယ် sis hippo ပါလား သူလည်း susan ဘက်ကနေ အားဖြည့်ကူညီနေတယ်ပေါ့လေ..ကဲကဲ... bro mrcastle ရေရှိတဲ့လက်နက်တွေအကုန်ထုတ်ခဲ့တော့ဗျာ:D
hippo on May 26, 2010 0
မဖြစ်မနေဆိုရင်တော့ မိန်းကလေးချင်းရိုင်းပင်းတယ်ကွ ... Susan လေးရေ မ Hippo လာပြီကွ ... :D :D :D :P
mrcastle on May 26, 2010 0
သြော် ခဏကိစ္စ၇ှိလို့အပြင်သွားပါတယ် ပြန်လာတော့ ဒီမှာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်နေပါပကော ။ ကိုစည်သူနောင်ပါမှတော့ ဘာကြောက်စရာရှိတော့မတုန်း မန်းလေးသူအယောင်ဆောင် ရန်ကုန်သူ ဆူဆန်နဲ့အဖွဲ့ကို အပြတ်သာ နှိပ်ကွပ်တော့မယ် :P
နှာစေးနေတယ် ဘယ်ထဲမှပါဝူး ... ဆိုသွားတာတော့ အရမ်းကောင်းတယ် ... ***** :D
လူဆွယ်ခြင်းသီးခံပါ ဟွင်းးးးးးးးးးး :mad :)))))))) :P
ဟုတ်တယ်စစ်စ်ရေ မပါလို့မရဘူး နီးစပ်ရာသာတုတ်ဓါးဆွဲပြီးအမြန်သာဝင်လိုက်ပါ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲကို :P
ဟင်..sis ရေမြင်းမလေးပါလား...ရေထဲဆင်းတာများသွားလို့ လား နှာစေးတာက...ဟဲဟဲ..နှာစေးနေလည်းမရဘူးဒီမှာပွဲက ကောင်းနေပြီ...:D
Rosies on May 26, 2010 0
arr par pay del good tal shint bro ma yay for your 5*******************
ကျေးဇူးးအထူးပင်တင်ချိပါသည် မမနှင်းဆီ ရေ အဟီးး;း;:))))))))))))))))))) :P >>>
အဟမ်း...အဟမ်း..၀င်ရောက်ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်တော့......... မန္တလေးသားဖြစ်တဲ့ bro mrcastle ဘက်ကနေပဲဝင်ပြောပေးရ မှာပေါ့...ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း မန္တလေးသား ဖြစ်နေတာကိုး...:ha>>ဒီလိုဗျ bro castle ရ..ရန်ကုန်သူတွေက လုံးဝကိုမယုံရဘူးတဲ့...ပြီးတော့အကြွားကလည်းထူသေးတယ်ဆိုပဲ...ဒီလိုပဲကြားဖူးတာလေးကိုကြုံတုန်းပြောပြတာပါနော်...မန္တလေးရွှေမြို့တော်ကြီးမှာနေတဲ့သူတွေအချင်းချင်းကတော့ဘာမှကိုပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးလေ...ဟဲဟဲ...တကယ်ကိုလိုက်ဖက်ညီပြီးတော့ အရမ်းနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲဗျာ....bro ရော ညီမလေးဖရဲတီးပါ ဆိုထားတာ perfect ပဲ..>>:atb:clap:clap
~မှန်တယ်ဗျို့~မှန်တယ်ဗျို့ bro thanzinchitthu ဘက်ကအပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်~းD~ ပြောချင်လွန်းလို့ သီချင်းအဆိုကောင်းတာမန့်ဖို့မေ့သွားတယ်~းP~ နားထောင်ရတာအရမ်းကောင်းတယ် bro mrcastle & sis SGG ရေ~~အားပေးသွားပါတယ်ဗျာ~****း)
ဟင် ဟိုဘက်က တရွီးရွီးနဲ့ မော်တော်ပီကယ်များလား သြော် ဟုတ်ဘူး ဘရီုကြီးနိုင်းနိုင်း လူတွေအောက်မှာပိနေပါပကော ...ှဆွဲထုတ်ကြပါဦးဗျိုးး
9naing on May 26, 2010 0
ရွှီးး ရွီးး ရွှီးး ရွီးးး (ခရာသံ)..... ဟေ့...... အားလုံးလူစုခွဲကြစမ်း...... ဟင်..... တားလို့မရတော့ဘူးးးး.... :S :S...... အားလုံးကကျွန်တော့်ကိုပဲ ဝိုင်းဆော်နေကြပီ...... အကူဒိုင်လူကြီး ရေ့ လာပါအုံး...... ပြောပဲပြောကြ... လက်မပါကြေးးးး။။။။ :P :P
ဪ... ဂလိုလား ရန်ကုန်သားတဖစ်လဲ မန်းလေးသားဘက်ကပေါမယ်လား ??? ဟွန့်......ရတယ်လေ စိန်လိုက် :mm :mm မယုံရပူးရား ??? မယုံရင်ပုံပြင်မှတ် :? ဒူမှအတင်းမယုံခိုင်းပေါင် အဟားးးးး:))))))) ယုံကျင်လွန်းလို့ပါဆိုပဲ ဟာဟ :)))):P>>> F4 ဂျဂါးအတိုင်းပဲပေါလိုက်မယ် ကိုယ့်ရှိလို့ကိုကြွားတာကွာ :mm ပါဖစ်ဒုန်း(တူ တို့ဂျဂါးနဲ့ပဲပြန်ပေါပေးလိုက်ပြီ ပါရမလဲကွ :yahoo :mm :mm ဟဲဟဲ ) ဟားဟားဟားဟားဟားးးးးးး ဟာ!!!! ရယ်တာရပ်လို့ရတော့ပူးးးးးး:))))))))) :P :D :ha ကျေးဇူးအထူးဘရိုဂျီး မာလကာတီးရေ >>>>
bro yaw sis yaw sing thwar dar perfect par pal shin ;clap; ;clap;ayanayan ko kg par dal ******* yee lal yee ya dal sing thwar dar ;verygood; par pal shin :D
အယ်... ဘရိုးကြီး... အရှုံးကိုမပေးနိုင်ဘူး..... :haha... သူများကိုကြတော့ ကြွားတယ်ပြောပြီး... သူကြွားတာကြတော့ ပြန်မကြည့်ဘူးးး.... ကဲဒိုင်လူကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ.... အရေးယူလိုက်ရမလား.... :haha
ခုနမန့်တာ စာကတစ်ဝက်ပျောက်နေလို့...ထပ်ပြီးတော့ပြောတာ ပါ.....ကြုံတုန်းလေးပြောပြတာနော်...ရန်ကုန်သူတွေကတကယ် ကိုမယုံရတာ..အကြွားကလည်းထူသေးတယ်...မန္တလေးရွှေမြို့ တော်ကြီးမှာနေတဲ့သူတွေကတော့ ပြောစရာမလိုလောက်ကို ကောင်းပြီးသား..အဲဒါလေးမပါလို့ ပြန်ပြောရတာပါ...:yahoo
ချနိုးလေးကကော မန်းလေးသူလား?? ရန်ကုန်သူလား?? ပါရဲ ?? စူစန် ဘက်ကမလားဟင်?? ဟီဟီးးး "))))))))))) (အတင်းဂျည်းဆွယ်တာ) ဟုတ်ပါပြီ အပျော်ပါ ကွယ် ....:P ရယ်ရတယ်ဆိုလို့ ကြိုးစားရကျိုးလေးနပ်ပြီလေနော,,,,, ကျေးဂျူး >>>>>>>
maureen on May 26, 2010 0
အရမ်းကိုကောင်းတယ် အစ်ကိုကာဆယ်နဲ့ စစ်လေးဆူဇန်....မေမြို့သူမိုးလေးလဲ လာအားပေးသွားတယ်နော်...:)..... စုံတွဲသီချင်းလေးတွေ များကြီးဆိုဦးနော်... အားပေးလျက်...*********************** for u...
မေမြို့ဆိုတော့ မန်းလေးနဲ့နီးတယ် ကျွန်တော်တို့မန်းလေးသားများအဖွဲ့သာမြန်မြန်ဝင်လိုကပါ :P
အော်..sis ကမေမြို့သူလား..အဲလိုမှန်းသိရင် မေမြို့မှာရှိတုန်းက အိမ်အလည်လာပြီးထမင်းလာစားပါတယ်..ဟဲဟဲ
အဲ ..... မေမြို့သူက ပါမှထင်မြင်ချက်ပေးးး မသွားးးး တော့ပူးရား အင်းးး မေမြို့ဆိုတော့ မန်းလေးနဲနီးတယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်????? ဒါဆို စူစန်ဘက်ကပါရမယ်လေနော့ :P :D မျက်နာမလိုက်ကြေး အဟီးးးးဟီးးးးး :)))))))) thz par sis maureen lay ..>>>>>
ဘေးဒိုင်ဆိုတော့ ဘယ်သူ့ဖက်မှ မပါဘူးနော်... အဟီးးးး...
ရပါတယ်ဘရီုကြီး ... ကျွန်တော်တို့ဘက်ပဲ ပါမယ်လို့ ခုနက တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောသွားပြီးပြီဆိုတော့ သဘောပေါက်တယ် ။ :P
အဲ..အဲ..ဘယ်သူ့ဖက်မှမပါဘူးဆိုပြီးတော့နော်...လက်ထဲကပုလင်းက ဘာလုပ်ဖို့လဲ..၀င်ရိုက်ဖို့တော့မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တယ် နော်...အဟဲ(အဲလိုပဲမျက်စိက မြင်တတ်တာ)
အံမာ သူကကြတော့ ဘေးဒိုင်ဆိုပြီး ဟိုဖက်မှာသွားမြှောက်ပေးနေပြီး ခုမှ sis paradise ရေ ရန်ဖြစ်နေပြီ ကူပါအုံးတဲ့ အောက်ဆီဂျင် ဂျီး.....:P
ဟာ !!!! ပါခုမှကြောက်ပါပြီဒုန်း???? ပါဘေးဒိုင်လဲ ???? ဒူ့ဘက်ကပါမှာလဲ ??? ချင်းချင်းပေါလိုက်ပါ ဟွန်းးးးးးး :mad ဟိုလိုလိုဒီလိုလို တော့မလုပ်နဲ့ မန်းလေးသူ အကြောင်းးး တိသွားစေရမယ်နော့ ဟွင်းးးးးးးးး ကဲဟာ := := := :sutti :)))))))))))))) :ha :haha :haha အဟားဟားဟားရားးးး;>>>>>>
ayoelay on May 26, 2010 0
ကောင်းမြဲ ကောင်းဆဲ အကောင်းတကာ့ ကောင်းဆုံးပါပဲ...နှစ်ယောက်လုံး ATB........ ကျွန်တော် တောင်ပေါ်သားလေး လာအားပေသွားပါတယ်.. & STARS******************************************************************************************************************
ပယ်ကတောင်ပေါ်တားလေးပါလိမ့်???? မန်းလေးသူ တဖစ်လဲ ရန်ကုန်သူကပိုကောင်းတာဟုတ်ပူးးးလားလေနော် အဟားးးးးးးး :)))))))))))))))) :D >>>>
ကျေးဇူးပါဗျာ ဘရီုရေ ...
Zarmaung on May 26, 2010 0
Owww...ကောင်းလိုက်တာ..ဘာနဲ့မှ နိုင်းလို့မရအောင် နားဆင်လို့ကောင်းလိုက်တာ...အရမ်းကောင်းလွန်းတယ်...အတိုင်းထက် အလွန်ဘဲ ဗျို့...အားပေး နားဆင်သွားပါတယ်..:atb..ဂွတ်မြဲ ဂွတ်..!!!!! ***********For Bro Mrcastle n Sis...
ရယ်ကောရယ်သွားပါရဲ့လားချင် ဟီးးးးးး:))))))))))))) :P
tzh bro :)
ဒီသီချင်းလေးက အရမ်းချစ်စရာကောင်းပြီး အချီအချလေးတွေနဲ့ ကျောင်းတုံးကဆို ပြဇာတ် သရုတ်ဖော်ကကျတာကို ပြန်မြင်ယောင်မိပါတယ် ~~အဆိုကောင်းတဲ့ မောင်နှစ်မ နှစ်ယောက်ဆိုသွားမှတော့ ပိုပြီး အသက်ဝင်သွားပြီး နားထောင်လို့လဲ အရမ်းကောင်းတယ်~~ပွင့်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ အူလိမ့်ပြီး ရီရသလို ~~~နှစ်ယောက်သား အတိုင်အဖောက်ညီညီဆိုသွား စကားပြောသွားတာလေးတွေက ကြည့်နေရသလို ပီပြင်လွန်းလှတယ် ရောရောင်ပြီး ရီသွားပြီကွယ်>>ဒို့တွေက အဲဒီထဲမှာ မပါလို့ မဆွေးနွေးတော့ဝူး ဟီး >>လက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးမယ်ဗျို့ :clap....:clap :D
ဟာ..ဘေးဒိုင်ဆိုပြီး ဘေးထိုင်နေလို့မဖြစ်ဘူးလေ bro 99 ရ... ဟိုမှာ ကိုစည်သူနောင်တို့ အချင်းချင်းအငြင်းပွားရင်းနဲ့ ရန်တွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီ..သွားဆွဲလိုက်ပါအုံး..ကျွန်တော်ကတော့ ကိုစည်သူ နောင်ဘက်ကနေ ၀င်ဆော်လိုက်ပြီဗျာ...ဟဲဟဲ(စည်းလုံးတာ)...
အယ်.... အဲ့လိုအချောင်ခိုလို့ ရဘူးလေ... ဒိုင်လူကြီးသွားလုပ်ပေးပါ sis paradise....ဟိုဘက်မှာ စကားများနေကျဘီ..... ကျွန်တော်က ဘေးဒိုင်လေ။။။ အဟားးးး
သဘောကျတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးစစ်စ်ရေ .. ပွင့်ကီးကို မနည်းကိုဆိုလိုက်ရတယ် ယောက်ကျားလေးဆိုရအဆင်ပြေအောင်လို့ ။ စကားပြောတွေကတော့ ဆိုတုန်းကသာ ဆိုလိုက်တာ ပြီးတော့နားထောင်ပြီးပြန်ရှက်နေတယ်လေ :)
ဟုတ်ပါရယ်... စစ်ရေ အဲ့ဒါကို vocal file record တုန်းက မရေမတွက်အောင် အမှားများစွာ၊ တချိန်လုံးရီနေရတာကတကြောင်း၊ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ record လုပ်ထားရတာပါ :yes >>> ကိုယ့်ဟာကိုနားထောင်ပြီး အတေအလဲရယ်နေရတာပါ ဟားဟားဟားဟား ;))))))))) ပေါရင်းနဲ့တောင်ရယ်ကျင်လာပြီချင့် ဟီးးးးးး :)))))))))))) သင့်ခယူ ပါစစ်ပါရာရေ >>>>>
ဒီသီချင်းလေးးး ကိုအရမ်းကိုသဘောဂျလို့ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖစ်အောင်၊ နားဆင်ဂျတူများဟာသရသခံစားပြီး ရယ်ရွှင်ဖွယ်ဖစ်အောင်၊ ကြိုးစားပြီးဖန်တီးထားပါတယ်။။ :)))))))) :P :D ကီးအခက်အခဲဂျားမှ အကောင်းဆုံး၊အတတ်နိုင်ဆုံးသီရှိုပေးသွားတဲ့ (ရန်တွေ့ကောင်းတဲ့ ) ရန်ကုန်သားတဖစ်လဲ မန်းလေးသားဂျီး ဘရိုဂျီး F4 ဂျီး (MR CASTLE) ကိုမီလီယံ စပါစီဘာပါ ။။။။:))))) :P နောက်.... မအားတဲ့ဂျားမှ အားကြိုးမန်တက် ကူညီ RECORD ပေးပါသော ဘရိုဂျီး နိုင်းနိုင်း F9 ဂျီးကို ကျေးဇူးအထူးပါ :)))))))) ပျော်ရွှင်စွာ အားပေးနားဆင်ဂျတဲ့ မောင်နမများကိုတော့အမြဲထာဝရကျေးဇူးပါချင့် >>>> :thanx >>>>>
အပြန်အလှန်ကျေးဇူးပါပဲဗျာ ။ အမှတ်တရသီချင်းလေးပါ :)
Feedback : 73